Ny famoronana Maison Décotterd dia ankalazan'ny Glion Institute of Higher Education
Home » Lahatsoratra farany farany » Tsindrio eto raha ity ny fanambaranao an-gazety! » Ny famoronana Maison Décotterd dia ankalazan'ny Glion Institute of Higher Education
Telo volana taorian'ny nidiran'i Stéphane Décotterd tao amin'ny Glion Institute of Higher Education, dia mankalaza ny famoronana Maison Décotterd ny Chef manana mari-pankasitrahana maro miaraka amin'ny andrim-panjakana mitantana ny fandraisana vahiny. Maison Décotterd dia toeram-pivarotan-tsakafo miaraka amin'ny toerana telo tsy manam-paharoa ao anatin'izany ny Restaurant gastronomic Stéphane Décotterd miaraka amin'ny fomba fijery manaitra ny Farihin'i Genève; ny Bistro avy amin'i Décotterd, ilay brasserie chic; ary ny Lounge Bar avy amin'i Décotterd miaraka amin'ny sakafo matsiro sy divay voafantina amin'ny vera.
Ireo trano fisakafoanana roa miavaka, hita ao amin'ny Hotel Bellevue teo aloha ao Glion, dia manaiky ny fahitan'i Stéphane Décotterd, chef Michelin kintana roa, momba ny sakafom-paritra, maharitra ary tany am-boalohany. Ho fanajana ny filozofiany, dia mitarika ny ekipany amin'ny fanatsarana tsy tapaka izy, amin'ny fanavaozana ny kaody momba ny gastronomie. "Ny sakafoko dia tena isam-paritra, maharitra ary tany am-boalohany, saingy mivoatra hatrany, toy ny ranon'ity farihy ity izay manentana ahy be," hoy i Stéphane Décotterd.
Hatramin'ny taona 2016, i Stéphane Décotterd dia manisa ao amin'ny brigade-ny ny Chef Pastry Christophe Loeffel tanora, izay nahazo ny loka "Chef Pâtissier of the year 2021" avy any Gault & Millau Switzerland ary ny "Bronze Desserts 2020" tamin'ny fiadiana ny ho tompondaka nasionaly frantsay ho an'ny tsindrin-tsakafo lovia. Vao haingana izy no nandray anjara tamin’ny fifaninanana “Patissier des Jahres” tany Cologne, Alemaina, ary nahazo ny laharana faharoa. Ilay Chef Pastry tanora mampanantena dia efa namolavola ny soniany manokana, miasa amin'ny geometry, texture ary fahatsorana. “Miezaka foana aho manampy ny fikitihana ny originality ary mitantara tantara miaraka amin'ireo vokatra. Omeko lanja lehibe ny fanasongadinana ny kolontsaina misy ahy, amin'ny fampiasana ny vokatra avy amin'ny faritra”, hoy i Christophe Loeffel.
Ao amin'ny efitrano fisakafoana, ny serivisy dia miantoka an'i Stéphanie Décotterd, talen'ny Maison Décotterd, sy ny ekipany. Manolotra serivisy miaraka amin'ny fihetsika voafehy tsara izy, ary manana fomba fiasa manokana, manolotra traikefa tsy hay hadinoina ho an'ny vahiny. Ity fanoloran-tena ho amin'ny hatsarana sy ny fiaraha-mientana ity dia nahafahan'i Stéphanie nahazo ny loka Michelin Swiss voalohany indrindra ho an'ny fandraisana vahiny sy ny fanompoana, tamin'ny Febroary 2019.
Fanomezan-toky ny fahatsarana, faly i Maison Décotterd ho anisan'ny Castles fampitàna fikambanana, miditra amin'ny tambajotran'ny hotely sy trano fisakafoanana tsy manam-paharoa 580 manerana izao tontolo izao, tompon'andraikitra sy tantanin'ny mpandraharaha tsy miankina izay mazoto amin'ny asany ary manolo-tena lalina amin'ny fananganana fifandraisana mafana sy maharitra amin'ireo vahiny. Tahaka ny sakafo sy ny filozofian'i Stéphane Décotterd, ny mpikambana Relais & Châteaux dia miaro sy mampiroborobo ny harena sy ny fahasamihafan'ny fomban-drazana ara-tsakafo sy ny fandraisana vahiny, mba hiantohana ny firoboroboan'izy ireo. Samy manokan-tena amin’ny fitandroana ny vakoka eo an-toerana sy ny tontolo iainana ihany koa izy ireo, araka ny voalazan’ny Vinan’ny fikambanana natolotra ny UNESCO tamin’ny Novambra 2014.
Ny mpianatra Glion dia mahazo tombony betsaka amin'ny fananganana trano fisakafoanana roa misy sonia ao amin'ny campus Glion, manome azy ireo traikefa fisakafoanana vaovao ary koa fahafahana tokana hianarana avy amin'ny talenta mahandro sakafo, mandray soa avy amin'ny fiofanana tokana amin'ny lakozia, serivisy ary bar. Nandritra izany fotoana izany, nohavaozina ny tobim-pianaran'i Glion Soisa mba hanatsarana bebe kokoa ny traikefan'ny mpianatra.